Lionel Messi Oo Ku Dhow Inuu Dhaafo Rikoor Kale Uu Heysto Maradona.
HomeWararka Ciyaaraha MaantaLionel Messi oo ku dhow inuu dhaafo Rikoor kale uu heysto maradona.
laadadka xorta ah ee Lionel Messi uu ka dhaliyay kooxda Valencia axadii ayaa ahaa kii 50aad ee uu xirto maaliyada Barcelona. Waxa uu shabaqa ka helay Jasper Cillessen qeybtii labaad ee Mestalla.
Markii uu sidaa sameynayay, wuxuu wadar ahaan uu dhaliyay 56 freekick koox iyo wadan waxaana uu sedax ka yaryahay rikoorkii Diego Maradona ee reer Argentine ee ahaa 59 laadadka xorta ah Messi ayaa horay uga sarre maray Manuel Pelegrina 45 iyo Daniel Passarella 43 marka loo eego wadarta guud ee xorta ah ee xulka.
Toddobaadkan, Messi ayaa wajihi doona isla kooxdii uu ka dhaliyay goolkiisii ugu horreeyay ee uu u dhaliyo Barcelona ee Atletico Madrid 32 jirka ayaa markii ugu horeysay laga soo celiyay kubad la soo saaray bishii Oktoobar 4, 2008, kulankii Barcelona ay 6-1 kaga badiyeen Los Rojiblancos ama Athletico madrid.